Bhodhoro redu rakanaka igaba rakanaka kune rako Doro, mabhodhoro edu anogona kugadzirwa nekristaro chena uye yakachena michena zvinhu, kukurumidza kugadzirwa kutenderera, mhando yakanaka, tiri mutungamiri muindastiri yebhodhoro, tinovimbisa mhando. Aya mabhodhoro egirazi regirazi matombo akasimba uye akasimba. Nyore kutakura kuenda kumapati, misi, iyo yekurovedza muviri kana basa. Usatya kuenda navo chero kupi. Ruvara bhodhoro rakajeka, rakajeka.Iyo yakavharirwa ine chando yakajeka uye inopenya. Zvinyorwa - Zvinogara kwenguva refu ...